HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Ahanta Aja Albaney Alemà Alemà any Pennsylvanie Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Armenianina (Andrefana) Attié Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bambara Baoulé Bariba Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Bosniaka Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chin (Falam) Chin (Hakha) Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cinamwanga Cinghalais Dagaare Dangme Danoà Dari Drehu Esan Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frafra Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Guerze Guéré Géorgien Haoussa Haya Hebreo Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kachin Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Khakasse Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kissi Kongo Konkani (Romanina) Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwanyama Laosianina Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luo Makoshi Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Mazahua Meru Mingrelian Mixtèque (Huajuapan) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Huasteca) Nambya Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Norvezianina Nyaneka Népali Obolo Oromo Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pemon Pendjabi Pendjabi (Shahmukhi) Persianina Piaroa Pidgin (Afrika Andrefana) Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Pular Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quechua (Huaylla Wanca) Quichua (Imbabura) Quichua (Santiago del Estero) Rarotonga Romanianina Rosianina Runyankore Rutoro Rômania (Arzantina) Rômania (Boligaria) Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Gresy Avaratra) Rômania (Romania) Rômania (Serbia) Rômania (Slovakia Atsinanana) Sango Saramaccan Sarnami Sehwi Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Shughni Sidama Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Svan (any amin'ny tany iva ??) Svan Ambony Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tandroy Tankarana Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Albaney Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Etiopianina Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Irlandey Tenin’ny Tanana Israelianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kroaty Tenin’ny Tanana Letonianina Tenin’ny Tanana Litoanianina Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Népali Tenin’ny Tanana Orogoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Slovenianina Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tetun Dili Ticuna Tigrigna Tiorka Tiv Toba Tojolabal Tok Pisin Tseky Twi Télougou Umbundu Urhobo Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wichi Wolof Xhosa Yorobà Éwé
Nohavaozina ny 15 Mey 2020
ZAVA-DEHIBE: MATOA IANAO MAMPIASA AN’ITY TRANONKALANAY ITY SY/NA MANDEFA FANAZAVANA MOMBA NY OLONA IRAY DIA EKENAO HOE AZONAY KARAKARAINA MIFANARAKA AMIN’IZAY VOALAZA AMIN’NY FIFANEKENA MOMBA NY TSIAMBARATELO ATO SY MIFANARAKA AMIN’NY LALÀNA MOMBA NY FANAZAVANA MAHAKASIKA OLONA MANOKANA NY FANAZAVANA OMENAO MOMBA NY OLONA IRAY.
Fanajana ny Tsiambaratelonao
Mombamomba ny Mpikarakara Fanazavana
Fiarovana ny Fanazavana
Ankizy Tsy Ampy Taona
Tranonkala Mpiara-miasa Aminay
Filazana Momba ny Fiovan’ity Fifanekena Ity
Hiaro sy hanaja ny tsiambaratelonao izahay. Hazavaina ato amin’ity Fifanekena ity ny fomba hikarakaran’ny tranonkalanay ny fanazavana momba anao, izay alainay aminao na alefanao aminay. Rehefa mitsidika ny tranonkalanay ianao, dia misy fanazavana sasany tazoninay. Ekenay hoe tena tokony hatao azo antoka ny fitehirizana an’izany fanazavana izany, ary tokony hampahafantarinay anao izay hampiasanay azy. Mety homenao anay ny mombamomba anao. Rehefa misy hoe “mombamomba anao” na “momba anao” ato amin’ity Fifanekena ity dia tafiditra amin’izay ny anaranao, adiresinao na adiresy e-mail ampiasainao, nomeraon-telefaoninao, na fanazavana hafa amantarana anao. Tsy asaina manome ny mombamomba anao ianao rehefa mijery ny pejy ho an’ny besinimaro ato amin’ity tranonkala ity. Tafiditra amin’ilay hoe “tranonkala” ity tranonkala ity sy ny tranonkala namany hafa, toy ny apps.jw.org, ba.jw.org, stream.jw.org, ary ny wol.jw.org.
An’ny Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) ity tranonkala ity. Any New York io fikambanana io, ary tsy natao hitadiavam-bola fa manohana ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah sy ny asa fampianarana Baiboly ataon’izy ireo. Manaiky an’izay voalazan’ity Fifanekena ity ianao rehefa manapa-kevitra ny hanokatra kaonty ato, hanao fanomezana, hangataka hotsidihina, na manao zavatra hafa mahatonga anao hanome ny mombamomba anao. Ekenao koa hoe tehirizina any amin’ny serveurs any Etazonia izany, ary ny Watchtower sy ny fikambanana namany izay manohana ny Vavolombelon’i Jehovah any amin’ny firenena samihafa no maka sy mikarakara ary mamindra an’ilay fanazavana, arakaraka izay nangatahinao. Miasa maneran-tany io fikambanana ara-pivavahana io amin’ny alalan’ny fikambanana any amin’ny tany samihafa, ohatra hoe fiangonana, biraon’ny sampana, na fikambanana hafa an’ny Vavolombelon’i Jehovah, mba hiarovana ny fanazavana voarainy.
Miovaova arakarak’izay ataonao ao amin’ilay tranonkala ny mpikarakara ny fanazavana alefanao. Raha manao fanomezana ho an’ny fikambanana ao amin’ny firenena iray, ohatra, ianao dia ho voarain’ilay fikambanana ny anaranao sy ny mombamomba anao. Intỳ koa misy ohatra hafa: Raha mangataka hianatra Baiboly ianao, dia ho voarain’ny biraon’ny sampana eo an-toerana sy ny fiangonan’ny Vavolombelon’i Jehovah hikarakara ny fangatahanao ny anaranao sy ny fomba hifandraisana aminao.
Mety hisy lalàna hifehy ny fiarovana ny fanazavana omena toy izany ao amin’ny tany misy anao. Mba hanampiana anao, dia azonao jerena ao amin’ilay hoe Birao Misahana ny Fiarovana Fanazavana izay adiresy azonao anoratana mba hanontaniana momba ny lalàna any aminareo.
Tsy ataonay ambanin-javatra mihitsy ny fiarovana ny mombamomba anao. Mampiasa fomba fitehirizana fanazavana sy teknika fiarovana manara-penitra izahay mba tsy hitrangan’ireto: Hitan’ny olona tsy nahazo alalana ny mombamomba anao, misy mampiasa amin’ny fomba ratsy ilay izy, misy mizara amin’olon-kafa, misy manova, misy mamafa amin’ny fomba tsy ara-dalàna, na very tsy nahy. Izay mpikarakara ny mombamomba anao sy izay olon-kafa asainay mikarakara an’izany dia tsy maintsy manaja ny hoe tsiambaratelo ny mombamomba anao. Tehirizinay ny mombamomba anao mandritra ny fotoana ilaina mba hahavitana an’ilay antony nakana azy, na arakarak’izay takin’ny lalàna mety hihatra, na arakarak’izay takin’ilay programa mpitahiry azy.
Mampiasa ny Transport Layer Security (TLS) izahay mba hanafenana ny mombamomba anao mandritra ny famindrana azy. Sarotra idirana ny ordinatera ampiasainay, ary mipetraka amin’ny toerana tsara ambina sy azo antoka hoe misy herinaratra mandeha tsara foana. Manaraka tsara ny tari-dalana apetrakay koa ny olona mampiasa azy ireo. Ny hiaro ny tsiambaratelo sy ny fanazavana ampitaina aminay no tanjonay. Manaraka fepetra hentitra izahay mba tsy hahitan’ny olona tsy nahazo alalana an’ireny fanazavana ireny.
Raha tsy ampy taona ianao ao amin’ny firenena idiranao amin’ny tranonkalanay, dia tsy maintsy miaraka aminao eo ny rainao na ny reninao na ny mpitaiza anao rehefa hampiditra ny mombamomba anao ianao. Raha ray na reny na mpitaiza ianao ary manome alalana ankizy tsy ampy taona hampiditra ny mombamomba azy ao amin’ilay tranonkala, dia tsy maintsy ekenao fa mihatra amin’ny fampiasan’ilay ankizy an’ilay tranonkala ity Fifanekena ity.
Mampiasa rohy mankany amin’ny tranonkala hafa mpiara-miasa aminay izahay, indraindray, mba hanaovana zavatra ho anao (ohatra hoe rehefa hameno fanazavana amin’ny alalan’ny Internet ianao). Tonga dia fantatrao hoe any amin’ny tranonkala hafa ianao satria hiova be ny endrik’ilay pejy, ary hiova koa ny adiresiny. Mety haharay e-mail na hafatra avy any amin’ny tranonkala mpiara-miasa aminay koa ianao, arakaraka ny fanazavana nangatahinao tato amin’ity tranonkala ity, anisan’izany ny fangatahanao hoe handefasana fampahafantarana ianao. Rehefa voafidy ny tranonkala hafa hiara-miasa aminay, dia arahi-maso ny fifanekena momba ny tsiambaratelo sy ny fiarovana fanazavana ampiasain’izy ireo mba hitovy amin’ny anay. Misy programa na tolotra omen’ireny tranonkala ireny anefa ary tsy miankina aminay ny fomba fiasany, ny fifanekena momba ny fampiasana azy sy momba ny tsiambaratelo, ary ny fifanarahana amin’ny ankapobeny. Rehefa mampiasa an’ireny programa na tolotra ireny àry ianao, dia izay fifanekena na fifanarahana apetrak’ilay tranonkala no hihatra aminao. Tsy mahazo fanavaozana momba an’izany izahay ka ampirisihinay ianao mba hamaky ny fifanekena ampiasain’izy ireo, alohan’ny hampiasanao an’ilay tolotra. Vakio koa ny toromarika mahakasika ny fomba fiasan’izy ireo raha misy tianao ho fantatra.
Hatsarainay sy hampianay foana ny fomba fiasan’ity tranonkala ity sy ny zavatra ho hita ato. Miova koa ny lalàna sy ny teknolojia ka hiova tsindraindray ny fomba hikarakaranay ny fanazavana omen’olona. Rehefa hita hoe mila ovana ity Fifanekena ity, dia hapetrakay ato amin’ity pejy ity izany mba ho fantatrao foana izay karazana fanazavana halainay sy ny fomba hampiasanay azy.
Mampiasa script ity tranonkala ity mba hanatsarana ny fomba fiasany sy mba hanampiana anao hahazo fanazavana haingana kokoa, fa tsy hoe mba hametrahana programa ao amin’ny ordinateranao, na hakana fanazavana tsy nahazoana alalana avy taminao.
Hizara Hizara Fifanekena Momba ny Tsiambaratelo
Nosy Wallis sy Futuna